पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिन एमाले नेता प्रकाश ज्वालाको संसदमा प्रस्ताव – YesKathmandu.com
‘पृथ्वीनारायण राजा मात्र थिएनन्,राज्य निर्माता पनि हुन–एमाले नेता ज्वाला
काठमाडौं । पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिने या नदिने बिषयमा राजनीतिक दलहरुबीच तर्क वितर्क भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता तथा अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय एकता दिवस अथवा पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेका छन् ।
ब्यवस्थापिका संसदको शून्य समयमा बोल्दै नेता ज्वालाले राष्ट्र निर्मातालाई सम्झनु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै सार्वजनिक विदा दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा आधुनिक नेपालको एकीकरण भयो, पृथ्वीनारायण राजामात्रै थिएनन् उनी राज्य निर्माता हुन्,’ ज्वालाले भने ‘त्यसैले सरकारले पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ ।’
नेपाल राज्य एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा २०६३ सालभन्दा पहिले सार्वजनिक विदा दिने गरिएको थियो । तर दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले त्यसलाई कटौति गदै आएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि विदा दिने सहमति गरेपनि अघिल्लो बर्ष निर्णय गरेको थिएन ।
नेता ज्वालाको प्रस्तावलाई सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै दलका सांसदले स्वागत समेत गरेका छन् ।
One thought on “पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिन एमाले नेता प्रकाश ज्वालाको संसदमा प्रस्ताव”
>>हाम्रा देशका नेताले जिउदोमै सम्मान पाउने कहिले होला?
मरेपछी सम्सादमा ४मिनेट सबैको टाउको निहुरिने सम्मान पाईदो रहेछ।
बरु त्यो तरिका बन्दा गरेर जीउँदैमा सबैको टाउको निहुर्‍यौने काम गर्नेपो होकि नेता ज्यु?
जस्को गाउमा पुल वा साँगो नभएर गोठालो र नुन्को भारी बोकेर जिबिका चालाउने गरिब जन्तालाई खोलाले बगाई रहेकोछ।
त्यही गाँउमा जन्मेर तिनै गरिबको भोट्ले नेता बन्यो गाउँलाई बिर्सेरा सहरको महालमा मर्दा गाउँलेलाई थाहानै छैन तर सम्सदमा शोक लागेउ अरे।
बरु जिउदो हुदा तेति बोल्ना दिएको भए केही हुने थियोकी सभामुख ज्यु?
जिउँदो हुँदा कोहो कोहो मरेपछिको माया मोहो देखाउने भनेको ब्लङ्केड ओडाएर राजालाई ढुट्टो पारे भन्नू उस्तै उस्तै हो।
>>नेपालको कुनैपनी ठुलो ठुलो धार्मिक आर्थिक स्थल जाँदा हेल्मेट लाएरा छुरी बोकेर जनुपर्ने अबस्था रहेछ। भगवानको बरदान माग्नु जाँदा अफ्नै गर्दान जालाकी भन्ने अबस्थापनि रहेछ।
भखरै तेई मनकामनाको मन्दिर गएका नेपालिलाई भारती धोतिले कुटेर रुवाएको भिडियोले मेरो रगत्नै ततायो पुलिसले पनि छुट्टाएजस्तो गरि समएर कुटाएको होकि छुटाएको हो दैबा जानुन तर धोतिलो ढुट्टो पारेको जस्तो देखिन्छ बिरगोर्खालिलाई रुएको देख्दा। तेसैले मचै कुनैपनी ठूलो ठुलो धार्मिक र आर्थिक स्थलमा नजाने बरु तेहा जाने भेटी बचाएर समाज मिलेर अफ्नै गाउँमा तेस्तै स्थल स्थापन गर्ने सोज्मापो छु है।
दुर्गा तामाङ सोलुखुम्बु हाल साउदी अराब बाट ।
पार्टी एकतामा ओलीको चाहाना न्यायचित, प्रचण्डको चाहाना समानता, कार्यकर्ताको चाहाना एकता